Bottle Kushambidza Machine, Bhodhoro Washing Machine - Micvd.com
NPACK vachenesa mabhodhoro vanoshandiswa kubvisa guruva nezvimwe zvidiki kubva girazi, simbi, uye mabhodhoro epurasitiki ekushambidza iwo zvisati zvaitika kubhodhoro. Izvi zvinosvibisa zvinowanzounganidzira mubhodhoro panguva yekuendesa kana kuchengetedza, uye inofanira kubviswa kuti ipe bhotoro rakachenesa. Asati azadzwa, midziyo inopfuudzwa kuburikidza nevortex chidzitiro che ionized mweya wakagadzirwa unochengetedza static bar. Iyo ionized vortex iyo inogadzirwa inodzikamisa iyo static mhosva inotungamira yekukwevera guruva uye imwe marara pasi pemidziyo inobvumira kuchenesa nyore kwebhodhoro. Yedu yakasarudzika yakasarudzika-inodzika misoro yemisoro inoderedzwa mumidziyo uye inoputika inodzora yemhepo yakatsimbirirwa yakamanikidzwa inoiswa mukati. A vacuum yakaitwa panguva imwe cheteyo kubvisa iyo yakasunungurwa simenti, kuchenesa bhodhoro. Iyi tsvina inozotumirwa kubhegi rekuunganidzira kuseri kwevachenesa mabhodhoro kana inogona kuiswa muzvirongwa zvako zvekurasa midziyo.
Yedu yekuchenesa midziyo yakagadzirirwa nekutarisa kushanduka, kuita zvinhu zvakawanda uye nyore. Izvo zvigadzirwa zvemakanika emuchina wedu wekushambidza bhodhoro zvinobvumidza akawanda micheka maumbirwo nemasaizi kuti zvimhanyiswe nekuchinja kuri nyore, uchishandisa mashoma kana asina kuchinja zvikamu. Iyo yepamusoro yekubata inobata zvigadziridzo zveCC pama rinsers edu inopa kugona kuchengetedza mapurogiramu akawanda muPLC controller, inowedzera kuderera nguva dzekuchinja. Mabhotoro ekuchenesa nemidziyo indexing marongero anogadziriswa nyore uye akaponeswa nema rinsers otomatiki setup mode, zvichiita kuti mabhindauko emidziyo yekushambidza mabhodhoro akwanise kuitwa nekukurumidza uye nesimba.
Zvigadzirwa zvekuchengeta wega
Otomatiki Bhodhoro Yemvura Washing Machine
Muchina uyu unoumbwa netende yekushandura, bhodhoro rekutamisa bhodhoro, muchina unoraira bhodhoro mune mutsara mumwe, uye uchinounza kumushini wekuwachisa Muchina uyu unokwanisa kuchengeta bhodhoro, kubhinya bhodhoro, uye nekuchinja mutoo unoyerera.
Inoshandiswa girazi bhodhoro, inogona kubatana nemuchina wekuzadza, inogona kuita kuti yekushambidza-yekuzadza-kumisa maitiro kuenderere mberi. Hombodo yekushambidzwa inoendeswa neimwe poker, uye ichipinda mukati meiyo cylinder nguva nenguva, chekutanga, iyo yekugadzira ultrasonic ichigadzira iyo patable iri pakati pemvura nehombodo, ipapo yaive nemvura yekupopota, mvura yakanatswa uye yakamanikidzwa mweya zvakare. mushure mekupedza kugeza, bhodhoro rinopinda mune inotevera maitiro.
Ultrasonic mudziyo inoumba iyo patacation --- yekutanga kupuruzira-- yechipiri kupfira- .. yakamanikidzwa mweya yekupuruzira [zvese zvinoshandiswa pakuwachisa exert pane zvemukati zvebhotoro, mweya unobva kune wekushandisa saiti
Tendeuka tafura Dia φ720
kuendesa kugona Inowiriraniswa neMuchina wekushambidza
Magetsi 220V 50HZ
Kunze Kwezviyero 750 × 1200 × 950
Kukwanisa Kuita 40-50bottle / min @ 100ml girazi.
simba 1.5 Kw
Yakamanikidzwa Mhepo Inoshandiswa 15m3/h,0.3~0.4kg/cm2
Mvura Inoshandiswa 0.6 ~ 1t / h
Outside Dimension 1380 × 900 × 1350
Otomatiki Bhodhoro Mhepo Washing Machine
Ndiwo otomatiki yekushambidza bhodhoro nemhepo. kugona kwacho kunoenderana nemhepo yekugeza mamhepo.
Mhepo compressor inofambisa mweya mukati mevheji mudziyo, gasi kuburikidza ne solenoid valve uye ion jenareta yakanatswa, iyo tracheal gasi shampoo yekufemera gasi mumabhodhoro kuburikidza nemuromo wegesi yekushambidza, kufuridzira kunze kunobva gasi kushambidza muromo nekumanikidzwa kwegesi, kumashure tracheal yakaneta marara gasi kune iyo kunze kuburikidza nekubuda simba.